Nanakorontana tao amin’ny ”bar” : maty voatsatoka antsy ilay tovolahy | NewsMada
Nanakorontana tao amin’ny ”bar” : maty voatsatoka antsy ilay tovolahy
Tovolahy iray, manodidina ny 19 taona, namoy ny ainy vokatry ny ratra nahazo azy. Voatsatoka antsy teo amin’ny tendany, nandritra ny savorovoro nitranga tao amin’ny ”bar karaoke” iray, etsy 67 ha Avaratra Atsinanana, ny alakamisy alina teo, izy.
Voatsatok’antsy teo amin’ny tendany ity tovolahy iray vao 19 taona monja teny 67 ha Avaratra Atsinanana, ny alakamisy teo tokony ho tamin’ny 10 ora alina. Araka ny vaovao avy eny an-toerana, DJ iray 25 taona, tao amin’ny trano filanonana iray eny an-toerana ny nahavanon-doza. Mbola tafavoaka ny trano fisotroana ilay tovolahy vao nitambotsotra ary maty niala aina tsy lavitra teo. Tonga teny an-toerana ny polisy, ary voasambotra io alina io ihany ilay nahafaty olona ka voatazona eny amin’ny polisin’ny BC Anosy.
Araka ny fanazavana azo, nisehoana ady tao anatin’ilay toerana fisotroana sady fanaovana karaoke io, ny alakamisy alina io. Nifamaly tamin’ny tompon-trano ireo mpisotro avy eo sady niady ny samy mpiara-misotro. Nisy ny fandaminana natao ka nitohy tamin’ny famoahana tany ivelany ireo mpisotro efa tao anatin’ny fahamamoana.
“Tsy fantatra anefa izay zava-nitranga”, hoy ny mpitantara fa niitatra tany amin’ilay DJ ny resaka ary izao niafara tamin’ny fanindromana antsy izao ny raharaha. Efa eo am-pelatanan’ny polisy ny famotorana ka miandry izay tena marina ny rehetra. Am-pelatanan’ny fianakaviany ny razana, ary mazava ho azy fa nametraka fitoriana izy ireo.
Raha ny vaovao avy eny 67 ha ihany, vao iray volana sy tapany teo, nisy tovolahy iray ihany koa maty voatsatoky ny tapaka tavoahangy teo amin’ny tendany. “Miverimberina loatra ny vonoan’olona tahaka izao, noho iny faritra iny mafana, na efa manao fisafoana matetika eny aza ny mpitandro filaminana”, hoy ny mponina.
Ankoatra ireo vonoan’olona anaty trano fisotroana, anisan’ny faritra isehoana asan-jiolahy matetika ihany koa ny eny an-toerana. Fantatra fa tao anatin’ny roa herinandro, nitrangana fanafihana toeram-pivarotana sy fanaovana karaoke miisa efatra teny an-toerana. Efa nisy iray tratry ny polisy tamin’ireo jiolahy ireo.
Manampy trotraka ireo ny fanendahana, izay efa ho isan’andro, na eny amin’ny fiantsonana taxi-be, na anaty fiara, indrindra ireo tratra alina. Mitaraina ny mponina na eo aza ny fisafoana ataon’ny polisy. Midadasika loatra ny faritra 67 ha, maro ireo toeram-pisotrana sy filanonana, ary mivoaka alina ny ankamaroan’ny mponina. Mandray andraikitra ny fokontany, saingy tsy mahasehaka ny fanaraha-maso ireo rehetra ireo.